စာဖတ်သူ အသင်။ သင့်ကံ ဆိုးနေသလား။? ဒါမှမဟုတ် သိပ်ကံကောင်း နေတယ်လို့ ထင်လား။? ဒါမှမဟုတ် ကံကောင်းတယ်လဲ မဟုတ် ကံဆိုး တယ်လဲ မဟုတ်ပါဘူးလို့ သတ်မှတ် ထားသလား။?
မပင်မပန်း ချမ်းချမ်းသာသာ လေး ကုသိုလ် ၅မျိုးကို ဆောင်ရွက်ရင်း … တစ်ဘ၀တာ ကံကောင်းသောသူ၊ နောက်ဘ၀ပေါင်းများစွာ.. ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နိုင်အောင်
နောင်တ ဆိုသည်မှာ အကုသိုလ် စိတ် ဟု ဆရာတော်များ ဟောကြားသည်ကိုမှတ်သားနာယူဖူးပါသည်။
အကုသိုလ် ပြုသူသည် နောင်တ ရမည်မှာမလွဲပေ။
သို့ သော် ကုသိုလ် ပြု၍ နောင်တ ရသူ လည်းရှိ၏။
မည်ကဲ့သို့နောင်တ ရပါမည်လဲ??????????
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:27 PM No comments:
ရေးသား၊ခေါ်ဆိုရာမှညောင်ရွှေဟုအမည်ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။သက္ကရာဇ်(၇၂၁)ခုနှစ်တွင်ညောင်ရွှေမြို့ကို တည်ထောင်ခဲ့သောစော်ဘွားကြီးဆီဆိုင်ဖလက်ထက် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၆၄၄)ခန့်ကာလ၊ ယခု သန်းထောင်ဘုရားနယ်မြေအတွင်းတစ်ခုသောနေရာတွင်ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်း ကွယ်ပျောက်လျက်ရှိသော လိုဏ်ဂူအတွင်းမှာ ဘုရားဓာတ်တော်၊မွေတော်များရောင်ခြည်ကွန့်မြူးသည်ကို သန်းထောင်နယ်သားတို့ ဖူးမြင်တွေ့ရှိကြသည်။
မသေရာ လမ်းခွဲရှိတယ် သတိထားပါဦး။
ကရုဏာက အကြောင်းကောင်းဖို့, ဉာဏ်ပညာက အကျိုးကောင်းဖို
လူသားတစ်ဦးအတွက် မြင့်မြတ်ရာသို့ သွားရာလမ်းခရီးမှာ မလွဲမသွေ လှမ်းတက်ရမယ့် လှေကား သုံးထစ် ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေက--
စိတ်ကောင်းရှိမှု၊ အသိဉာဏ်ကြီးမြင့်မှုနဲ့ ၊ အများအကျိုးပြုမှုတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကောင်းရှိမှု ဆိုတာဟာ ကရုဏာတရားရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်သလို အသိဉာဏ် ကြီးမြတ်မှုက ပညာ စေတသိတ်ရဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကရုဏာ တရားနဲ့ ပညာတို့ရဲ့ လက်တွေ့ ပေါင်းစပ်မှု အင်အားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လောက ကောင်းကျိုး သယ်ပိုးမှု တွေကတော့ အများ အကျိုးပြုမှုရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကရုဏာတရားဟာ အများရဲ့ ကိုးစားရာဖြစ်ပြီး ပညာတရားက မိမိရဲ့ ကိုးစားရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သနား ကြင်နာခြင်းနဲ့ သူတစ်ပါးကို စောင့်ရှောက် တတ်သူဟာ မိမိကိုလည်း စောင့်ရှောက်ရာ ရောက်ပါတယ်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:42 AM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:41 AM No comments:
အစိုးရ၀န်ထမ်း၊ ပုဂ္ဂလိက၀န်ထမ်း၊ခုနောက်ပိုင်း ကုပ္ပဏီဝန်ထမ်း၊စတိုးဆိုင်ဝန်ထမ်း၊ စသဖြင့်ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အမျိုးမျိုးအမည်တပ်ခေါ်နေကြပေမယ့်လဲ၊ လူသားအားလုံးဟာ ၀န်ထမ်း တွေချည်ပါဘဲ၊